रोचक – Page 228 – Etajakhabar
अब अाफ्ना नाङ्गा फोटा धितो राख्नुहोस्, अनि ऋण पाउनुहोस्
मंसिर २६ गते– तपाईं हामी सबैले आफूसँग भएको जग्गाजमिन तथा जिन्सी धनमाल धितो राखेर ऋण लिने कुरा त थाहा पाएकै छौं । तर अब दुनियाँमा नाङ्गा फोटा धितो राखेर पनि ऋण लिन पाईने भएको छ । चीनको एउटा कम्पनीले धरौटीको नाममा युवतीहरुका नांगा फोटा राख्न थालेको हो । कम्पनीबाट ऋण लिनका लागि युवतीहरुले धरौटीको रुपमा आफ्नो नांगो फोटो परिचयपत्रका साथ खिचाउनुपर्छ । निर्धारित समयमा ऋण तिरेमा कम्पनीले धरौटीको रुप...
प्रेमी भेट्न गएकी आमाले ९ दिनसम्म थुनेर २३ महिने छोराको गरिन् विभत्स हत्या
एजेन्सी । आमा एक सन्तानका लागी भगवान हो । त्यो भन्दा अर्को के हुन सक्छ र या भनौ आमा भगवानको अर्को रुप हो । तर यहा त्यही आमा एक रन्तानका लगी कलकं भएकी छिन् । यूक्रेनमा आमा प्रेमी भेट्न गएपछि खान नपाएर एक २३ महिने बालकको मृत्यु भएपछि यो खबर सनसनी फैलियो । बिबिसीका अनुसार २३ महिनाको बालक छोडेर प्रेमी भेट्न पुगेकी आमाले घरमा छोराछोरी छोडेको बिर्सिएपछि नौ दिनसम्म खान नपाएर मृत्यु भएको जनाइएको छ । २०...
सुत्दा ब्रा र पेन्टी खोल्ने बानी बसालौं ! पढ्नुहोस् फाईदा
ताजा खबर :- दिनमा ब्रा र पेन्टी अनिवार्य लगाउने र राति खोल्ने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । भित्री वस्त्र खोलेर सुत्नुका केही फाइदा छन्ः रक्तसञ्चार सुचारु हुन्छ ब्रा–पेन्टी कसिलो हुने भएकाले यसले रक्तसञ्चारलाई सुचारु हुन दिँदैन, जसले दीर्घकालमा अनेक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । दाग बस्दैन ब्रा र पेन्टी लगाएर सुत्दा इलास्टिकले छालामा रातो दाग लगाउँछ । पछि यस्तो दाग कालो बन...
अध्ययन भन्छः मानसिक स्वास्थ्यका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग उत्तम
मेलवर्न, २४ मङ्सिर- सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने हालै अष्टे«लियामा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानिसको तनाव, चिन्ता र खुसीबीचको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । युनिभर्सिटी अफ मेलवर्न र मोनास युनिभर्सिटीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालले एक अर्कालाई सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग गरेकाले मा...
विष्णुदेवीको मन्दिरमा आज भात चढाउने भक्तजनको भीड
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर- काठमाडौँको दक्षिणभेगस्थित सतुङ्गलमा रहेको विष्णुदेवीको मन्दिरमा आज भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । प्रत्येक वर्ष मङ्सिर शुक्ल दशमीका दिन भात चढाउन भक्तजनको भीड लाग्ने गर्दछ । सप्तमीका दिन त्यस क्षेत्रमा दिइएको बलिबाट बनेका विभिन्न परिकारसमेत आज विष्णुदेवीलाई चढाउने गरिन्छ । भक्तजनले घरघरमा भात पकाएर मन्दिरमा लगेर चढाउँदा घरमा अनिकाल नहुने जनविश्वास छ । मानिसलाई सत्कर्ममा लाग...
ताजा खबर काठमाडौं:- पेटमा विभिन्न समस्या निम्तिने गर्छन् । दुख्ने, ग्यास निम्तिने, कब्जियत हुने, पखाला लाग्ने, मासी पर्ने, उल्टी हुनेजस्ता सामान्य समस्या आइरहने गर्छन् । जुनसुकै वेला पेटमा हुन सक्ने यस्ता गडबडी लिएर अस्पताल पुग्नुभन्दा घरमै सामान्य उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ । सामान्य सजगताले नै यस्ता सामान्य समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले केही उपायबारे जानकारी दिएका छन् : ...
अचम्म ! सेरोगेसीको माध्यमबाट आफ्नै छोरीको छोरा जन्माइन् हजुरआमाले
काठमाडौं, मंसिर २४ - बेलायतकी एक महिलाले सेरोगेसीको माध्यमबाट आफ्नै छोरीको छोरा जन्माएकी छिन् । ४५ वर्षकी जुली ब्रेडफोर्डले छोरी जेसिका जेन्किन्सका छोरा ज्याकलाई जन्म दिएकी हुन् । जेसिकालाई क्यान्सर भएकाले उनी आमा बन्ने सक्ने थिइनन् । २१ वर्षकी जेसिकालाई तीन वर्षपहिले सर्भिकल क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । त्यतिवेला जेसिकाको उमेर १८ वर्षको मात्र थियो । क्यान्सर पत्ता लागेपछि जेसिकाले आफ्नो ग...
जहाँ नग्न फोटो बन्धकी राखेर ऋण लिइन्छ, खुल्यो सनसनी मच्चाउने रहस्य
एजेन्सी । मानिसले गरिब र अभावमा जे पनि गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुराको उदाहरण बेलाबेलमा देखिए पनि हद नै पार गरेर गरिएका सम्झौता र रहस्य यसरी बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण चीनमा देखिएको छ । जहाँ अनलाइनमार्फत उधारो लिने महिलाको नग्न फोटो सार्वजनिक भएपछि हल्लाखल्ला नै मच्चिन पुगेको छ । चिनिया समाचार संस्थाहरुका अनुसार १ हज्जार युवतीको नग्न तस्बिर लिक भएको छ । जसले अनलाइन मार्फ...
८ हजार रुपैयाँ र गहना चोरर २२ वर्षिया मिससँग भागे यि छात्र, प्रहरीले दियो अनौठो बयान
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा बिशे होस वा प्रेम गर्नका लागी केटी भन्दा केटाको उमेर बढी र उ परिपक्व हुनुपर्छ । तर यसलाई मान्ने पक्षमा छैनन् भारतको बरेलीस्थिती १४ वर्षीय विद्यार्थी र एक २२ वर्षीया शिक्षिका । अविबाहित शिक्षिकासँग मिलेर रामवीरका छोराले घरबाट भाग्दा ८ हजार रुपैयाँ नगद र केही सुनका गहना समेत चोरेर भागेको परिवारको भनाई छ । ति शिक्षिका बालकले पढ्ने स्कुलकै मालिककी छोरी हुन् । शिक्षिका र बालक...
जहाँ छोरी भएर जन्मिएका बच्चाहरु १२ बर्षपछि आफैं छोरामा परिवर्तन हुन्छन्…
सुन्दा पनि पत्यारै लाग्न नसक्छ । कुनै छोरी मान्छे पछि आफैं छोराकारुपमा परिवर्तन हुन्छ भनेर । हाम्रै विश्वको एउटा देश डोमिनिकन रिपब्लिकको सेलिनास भन्ने गाउँमा भने यस्तै हुन्छ । जहाँ छोरी भएर जन्मिएका बच्चाहरु १२ वर्षका भएपछि छोरा बन्ने गरेका छन् । छोरी भएर जन्मिएका बच्चाहरु १२ वर्षका पुग्दा शारीरिक तथा जैविक रुपबाटै छोरामा परिणत हुन्छन् र आमाबाबुले पनि छोरा या छोरी भनेर त्यतिबेला मात्रै पत्तो पाउँ...
Previous 1 … 227 228 229 … 253 Next
आज राति १२ बजेदेखि खाना पकाउने ग्यासको मुल्य घट्दै, कति हुँदैछ नयाँ मुल्य ?
कोहलपुरमा तीन जना मिलेर संविधान ज लाउँदै गर्दा पुगे प्रहरी नि यन्त्रणमा
ऐश्वर्यालाई हेर्दै शाहरुखले भने ‘तिमीसँग जोडी बाँध्न नपाउँदा दुखी छु’
पशुपतिमा मोदीको जन्मोत्सव, पशुपतिमै भेटियो बम, नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली पुग्यो घटनास्थलमा